Blogger များသိသင့်﻿စရာ... — Steemit
အခုကျ﻿နော်﻿ သိထားသ﻿လောက်﻿ မြန်﻿မာBlogger﻿ တွေ
မြန်﻿မာBlogger﻿တွေအ﻿နေနဲ့ မိမိBlog or Website တို့မှာ အဆင်﻿လာအားဖြင့်﻿ ﻿ကြော်﻿ငြာAds﻿လေး﻿တွေထည့်﻿ထားတက်﻿ကြပါတယ်﻿ အ﻿ကြောင်းမှာ မိမိ﻿ငွေရချင်﻿လို့ပါ မိမိတို့ရဲ့ Blog Siteက﻿နေ Link﻿တွေCopyကူး Facebook နဲ့ Facebook Page﻿တွေမှာ ပြန်﻿လည်﻿တင်﻿ပြီး Trafficများ﻿အောင်﻿ပြုလုပ်﻿ကြသည်﻿မှာလဲ အဆင်﻿အလာတစ်﻿ရပ်﻿ပါပဲ.. ထိုသို့ပြန်﻿လည်﻿Shareတင်﻿မှသာလဲပဲ မိမိBog or Websit သို့ စာဖတ်﻿သူ﻿တွေအလို﻿လျောက်﻿ ﻿ရောက်﻿ရှိလာမှာပါ။ Blog trafficများ﻿လေ﻿လေ မိမိဝင်﻿﻿ငွေများများရ﻿လေပဲ မဟုတ်﻿ပါလား...? ဒီလိုနည်းနဲ့ Blogger﻿တွေ Website Owner﻿တွေ ﻿ငွေရှာကြရပါတယ်﻿။
ဒါ﻿ပေမယ့်﻿ ယခု﻿နောက်﻿ပိုင်းမှာ Facebookရဲ့ စည်းမျဉ်းတစ်﻿ရပ်﻿ဟာ ရုတ်﻿တရက်﻿ ﻿ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ အ﻿ကြောင်းက﻿တော့ အရင်﻿လို Blogger﻿တွေ Website Owner ဟာ အရင်﻿က﻿လောက်﻿ ﻿ငွေအရနည်းပါးလာခဲ့ပါတယ်﻿ အရမ်း﻿အောင်﻿မြင်﻿﻿နေတဲ့ Page Owner﻿တွေ Website owner﻿တွေ﻿တောင်﻿ ညီးညူသံကြား﻿နေရပါတယ်﻿... ဒါဟာ ရုတ်﻿တရက်﻿﻿ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Facebook စည်းမျဉ်းအသစ်﻿﻿ကြောင့်﻿ပါ။
ဘယ်﻿လိုစည်းမျဉ်း﻿တွေလဲဆိုတာ ကျ﻿နော်﻿သိသ﻿လောက်﻿ရှင်းပြပါ့မယ်﻿ Facebook နဲ့ Facebook ﻿Page﻿တွေမှာ
Link နဲ့တင်﻿ထားသည့်﻿ပိုစ့်﻿ နဲ့ ရိုးရိုးlinkမပါပဲ တင်﻿ထားတဲ့ပိုစ့်﻿၂ခုရှိတယ်﻿ဆိုပါစို့ ..
ရိုးရိုးတင်﻿ထားပိုစ့်﻿က Reach ပိုရပါတယ်﻿ တစ်﻿နည်း﻿ပြောရရင်﻿ Traffic ပိုများတယ်﻿ ﻿နောက်﻿တစ်﻿နည်း﻿ပြောလို့ရ﻿သေးတယ်﻿ အဲ့ဒီပို့စ်﻿ကို လူပိုမြင်﻿﻿တွေ့နိူင်﻿ပါတယ်﻿...
Linkနဲ့တင်﻿လိုက်﻿တဲ့ပိုစ့်﻿ဟာ ကျ﻿နော်﻿တွက်﻿ကြည့်﻿ချက်﻿အရ﻿တော့ ရိုးရိုးတင်﻿လိုက်﻿တဲ့ပို့စ်﻿နဲ့ Reach နိူင်းယှဉ်﻿ကြည့်﻿လိုက်﻿ရင်﻿ 90%ပျမ်းမျှ﻿လောက်﻿ Linkနဲ့တငါသည့်﻿ပိုစ့်﻿က Reach မ﻿ရောက်﻿တာကို ﻿တွေ့ရှိရပါတယ်﻿။
Blogger﻿တွေထမင်းငတ်﻿ကိန်းပဲ လို့ ကျ﻿နော်﻿ယူဆတယ်﻿။
Bloggerဟူသည်﻿ မိမိတင်﻿သည့်﻿ပိုစ့်﻿တိုင်းမှာ Traffic များမှ ﻿အောင်﻿မြင်﻿နိူင်﻿သည်﻿ Pageမှာတင်﻿သည့်﻿ ပို့စ်﻿ဆိုပါကလဲ Reach များမှ လူသိများပါမယ်﻿ Websiteထဲ လူပိုပြီးဝင်﻿ပါလိမ့်﻿မယ်﻿...
အထက်﻿ပါ﻿ကျ﻿နော်﻿﻿ပြောခဲ့﻿သော Facebook စည်းမျဉ်းဆိုတာ Facebook Instant Articles feature လို့﻿ခေါ်ပါတယ်﻿။
2015﻿လောက်﻿က စတင်﻿﻿ပေါ်﻿နေခဲ့ရာမှာ ယခု2017မှ ကျ﻿နော်﻿တို့နားကို ﻿ရောက်﻿လာခဲ့ပါတယ်﻿ ﻿ရောက်﻿﻿ရောက်﻿ချင်းပင်﻿ ပညာပြပါ﻿လေ﻿တော့တယ်﻿လို့ ဆိုမလား?
Facebook instant article feature သစ်﻿ဟာ ဘယ်﻿လိုအသုံးဝင်﻿လဲဆိုရင်﻿ ကျ﻿နော်﻿တို့ facebookမှာ linkနဲ့တင်﻿ထားတဲ့ပိုစ့်﻿﻿တွေကို ﻿တွေ့ဖူးတယ်﻿ဟုတ်﻿ အဲ့လိုlinkကိုနှိပ်﻿လိုက်﻿ရင်﻿ Browser တစ်﻿ခုခုနဲ့ Websiteဆီ﻿ရောက်﻿ပါတယ်﻿ ၊ Facebook instant article feature နဲ့ချိတ်﻿ပြီးတင်﻿ထားတဲ့ ပိုစ့်﻿link﻿တွေက﻿တော့ Instant article နဲ့ပြပါတယ်﻿ ၊ Browserနဲ့မပြ﻿တော့ပါ။
Facebook instant article feature ဟာ ယခု﻿နောက်﻿ပိုင်း အ﻿ရေးပါလာ﻿နေပါပြီ
Facebook ရည်﻿ရွယ်﻿ချက်﻿က Mobile Friendly မဖြစ်တဲ့ Website များနဲ့ Loading Time နှေး တဲ့ Website များ ဆီ ညွှန်ထားတဲ့ Post တွေကို Newsfeed မှာ Rank လျှော့ချပြီး ပြပါမယ်တဲ့ခင်﻿ဗျာ.....
ဒီလိုနည်းနဲ့သာ Linkနဲ့ပြန်﻿တင်﻿﻿နေတဲ့ Websiteပိုင်﻿ရှင်﻿﻿တွေဆက်﻿သွား﻿နေရင်﻿ မိမိSiteမှာ သရဲ﻿တောင်﻿﻿﻿ခြောက်﻿မှာ ﻿ကြောက်﻿ရပါလိမ့်﻿မယ်﻿....
အဲ့ဒီ့﻿တော့ မြန်﻿မာBlogger﻿တွေအတွက်﻿ ဘယ်﻿လိုတင်﻿ပြီး ဘယ်﻿လို ﻿ငွေရှာရမလဲဆိုတာ ﻿နောက်﻿ပို့စ်﻿မှာ ﻿ဆက်﻿လက်﻿﻿ရေးပါအုံးမယ်﻿ခင်﻿ဗျာ......
မြန်﻿မာ Bloggerများနှင့်﻿ Steemit Myanmar များ ﻿အောင်﻿မြင်﻿ကြပါ﻿စေ......
နာကတော့ link ထဲဝင်ကျိမှစာဖတ်ရတာ ကိုအလွန်မုန်း
ကောင်းတယ်ဟ ကိုယ်ကတော့ အစက သတိမထားမိဘူး အခု ပို့တ်လေးဖတ်မှပဲ သိလာတယ်..ကျေဇူး..
Steemit. အ​ကြောင်း ဘယ်​မှာဖတ်​ရမလဲဗျ
heinlinzaw (25) ·2years ago